University of Strathclyde - Study in United Kingdom, eScotland
University of Strathclyde Iinkcukacha
Zifumaneke : 1796
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa University of Strathclyde
Ukubhalisa kwi-University of Strathclyde
Strathclyde yindawo enkulu ukufunda kunye nokonwabela ubomi ngexesha elinye. Kwaye le apho ningawufumana yonke into ngathi – kwindlela esifundisa, ukuba yintoni e Glasgow nendlela ukuhambahamba.
IYunivesithi yasekwa 1796 njengoko 'indawo yokufunda luncedo’ yaye oku kusala nomnqophiso wethu namhlanje: ukudibanisa ukugqwesa kwizifundo kunye ukufaneleka kwezentlalo nezoqoqosho.
Njengoko 'indawo yokufunda luncedo’ iYunivesithi izibophelele phambili kuluntu ngokusebenzisa bagqwese kuphando, imfundo kunye nolwazi exchange, kwaye ngokuthethana enobuchule kunye nemibutho engamaqabane ekuhlaleni, kumanqanaba kazwelonke nawehlabathi.
Ukuze ube iziko olwahlukileyo, luphawulwa ngokukhokela uphando ubugcisa elikuso kunye igama elihle kulo lonke uphando, imfundo kunye nolwazi exchange.
Ukunikezela ezikumgangatho ophezulu, amava imfundo obukhuthazayo kubo bonke abafundi bethu nokuvelisa abaphumelele ebalaseleyo zobungcali edlamkileyo kwishishini, ishishini kunye noqeqesho.
Ukuze zalamaxesha esibujonga ngayo, iimbono ezintsha, ekudaleni amathuba amatsha yaye bathathe inxaxheba kwimisebenzi yentsebenziswano intsebenziswano nokubambisana ukuba kuzuze uluntu ngokubanzi.
Ukwenza kunye nokukhuthaza bonke abasebenzi ukuze baphuhlise iitalente zabo ngokupheleleyo kwaye igalelo kufezekiso mission yeYunivesithi.
Ukwenza igalelo kuphuhliso kunye nomgangatho wobomi City bethu, nesizwe kunye noluntu lwamazwe ngamazwe.
Sizimisele ukuba ekuboneleleni ngemfundo ophezulu ezikumgangatho namava bonke abafundi, kungakhathaliseki ukuba bavela. Iyoyikeka ukuba bavelise iziphiwo zabo ngokupheleleyo, ekuveliseni abantu ebalaseleyo zobungcali edlamkileyo kwishishini, ishishini kunye noqeqesho.
Amava ethu umfundi sele intliziyo yonke into esiyenzayo. IDyunivesithi ukwenza utyalo qhinga ukuba ijolise ekuxhaseni injongo yethu ngokubonelela ezikumgangatho ophezulu, imfundo uphando-ekhokelwa kwaye umfundi obalaseleyo experience.The University ijonge ukubonelela abafundi yayo zokufundisa kunye ezintsha, ubugcisa kunye nezibonelelo zokufunda. Kwakhona Sizimisele ukwandisa amathuba kwincoko, kwaye ukubonelela abafundi ithuba nefuthe 'indlela yethu yokuhamba’ njengoko sisebenza kunye ekuphumezeni umbono wethu yokuba yiyunivesithi lobuchwepheshe ngamazwe.
Siya imali kwiinkqubo zemfundo ezibonisa eyakhayo, indlela ebubuchule ezintsha kwaye isikhundla nathi phambili ukufundisa nokufunda ngaphakathi zonke iinkalo. IYunivesithi Kukwakhuthaza nabafundi balo ukuba badlale indima ebonakalayo kwincoko malunga isicwangciso wethu kunye nombono ngekamva.
Accounting & imali
umchiza & wohlengahlengiso
Civil & engineering lokusingqongileyo
ikhompyutha & ulwazi lwezesayensi
uyilo, kwemifanekiso & ulawulo engineering
electronic & injineli yombane
ububele & ukhenketho
izakhiwo Naval, ocean & engineering marine
ikhemesti & inzululwazi kwezonyango
umsebenzi Physical ngenxa yempilo
umsebenzi Social & nkqubo Social
Speech & therapy ulwimi
Strategy & umbutho
Yunivesithi yasekwa ngowe 1796 obizwe ngokuthanda John Anderson, uprofesa Philosophy Natural kwiYunivesithi Glasgowwho wemka imiyalelo kwaye uninzi yakhe ukwenza eyunivesithi yesibini e Glasgow eziya kujolisa “Learning eluncedo” - specialising in zifundo zeprakhthikhali - “kuba zonke izinto ezilungileyo uluntu kunye nokuphuculwa yezenzululwazi, indawo yokufunda luncedo”. Kamva University ogama kwikhampasi yaso somzi emva kwayo.
in 1828, iziko labizwa University Anderson kaThixo, ngokuyinxenye ekuzalisekiseni umbono Anderson ngayo iiyunivesiti ezimbini kwisixeko Glasgow. Igama kwaguquka 1887, ukubonisa into yokuba kwakungekho igunya ngokusemthethweni ukuba ukusetyenziswa kwesihloko 'eyunivesithi'. Nje ngeziphumo, Glasgow kunye West of Scotland Technical College kwasekwa, waba College Royal Technical ngo 1912, kunye Royal College of Science and Technology in 1956 kugxila zesayensi nokufundisa engineering kunye nophando. abafundi abenza akwazi ukufumana izidanga ze-University of Glasgow okanye Ncokola elingana the Royal College of Science and Technology (ARCST).
Phantsi Principal Samuel Curran, ahlonitshwe kwihlabathi yemvelo nuclear (kunye Umsunguli ekhawuntareni scintillation), i College Royal wazuza University Status, abafumana Charter wayo Royal ukuba abe The University of Strathclyde ngo 1964, ukuhlanganisa kunye Scottish College of Commerce ngexesha elifanayo. Ngokwahlukileyo koko inkolelo ethandwayo, The University of Strathclyde ayidalwanga ngenxa iNgxelo Robbins - isigqibo ukunikezela i Royal College ubume eyunivesithi sele yenziwe ngaphambili kwi 1960 kodwa walibala ngenxa Report Robbins. The University of Strathclyde yaba eyunivesithi lokuqala zobugcisa i-UK leyo ebonisa imbali yayo, ukufundisa kunye nophando ukutshatshela kwezemfundo zeteknoloji. in 1993, i-University efakwe Jordanhill College of Education.
Le yunivesithi liphuhlise igama layo likhule ukusuka malunga 4,000 abafundi bexesha elizeleyo 1964 kuka 20,000 abafundi 2003, xa kubhiyozelwa iminyaka eyi-100 kungekabekwa ilitye lesiseko yoqobo isakhiwo Royal College.
ngoJulayi 2015, Nobungangamela bakhe, ukumkanikazi uvule Technology and Innovation Centre (TIC), e University of Strathclyde.
Uyafuna ukuxoxa University of Strathclyde ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
University of Strathclyde kwi Map
iifoto: University of Strathclyde ezisemthethweni kwiFacebook
University of reviews Strathclyde
Dibanisa ukuxoxa ka-University of Strathclyde.
UMary uKumkanikazi University of London London